Hargeysa: Dad Ku Dhow Konton Kun Oo Muwaadinnimo Isku Diwaangeliyey Xog Ururin Wargeyska Somalilandtoday ku Sameeyay Diwaangelinta Socota | Somaliland Today
← Beesha Caalamka Oo Ka Hadashay Qarax Dadkii Ku Dhaawacmey Timaha Iyo Maqaarku Ka Daateen
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Oo Sii Adkeeyay Musharaxnimada Madaxwaynaha, Kana Jawaabay Tuhunnada Mucaaradku Ka Qabaan Qabsoomidda Doorashada →
Hargeysa: Dad Ku Dhow Konton Kun Oo Muwaadinnimo Isku Diwaangeliyey Xog Ururin Wargeyska Somalilandtoday ku Sameeyay Diwaangelinta Socota
(SLT-Hargeysa) – “Qofka Hargeysa iska diwaan-geliyaa haddii uu isku dayo inuu Ceerigaabo iska diwaan-geliyo, waa la qabanayaa, waayo nidaamku wuu isku xidhanyahay dhammaan Gobollada oo dhan”sidaasi waxa yidhi Mulkilaha Shirkadda Sahal ee fududeysay hir-gelinta Diwaan-gelinta Medeniga ah Eng. Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil oo Koox wariyeyaal ah oo iskood isugu xilqaamay daba-galka habka ay u socoto diwaan-gelintu sameeyay oo kula kulmay xarunta Guud ee laga maamulayo Qalabka lagu fulinayo Diwaan-gelinta oo ku taalla dhismaha cusub ee Xafiiska Badhasaabka Gobolka Maroodi-jeex.
“Waxaanu isticmaalaynaa Adeeg Internet oo ay bixinayaan Shirkadaha Telesom iyo Somtel, kaasoo ah (in xogta dadka laga qaadayaa aanay ka gudbayn Somaliland), oo aanu macluumaadka dhex marayaa gudaha dalkeena dhaafaynin, looguna talo galay howshan oo qudha.”ayuu sii yidhi, isagoo kulan xog-waraysi ah wariyeyaaasha la qaadanayay.
Eng. Cabdirashiid, Waxa uu u muuqday khabiir Kalsooni badan ku qaba howsha ay shirkaddiisu u babac dhigtay ee ay duruufaha siyaasaddeed iyo dareennada war-xumo tashiilka ahi ku gedaaman yihiin, taasoo sababaha cabsida laga qabo keenay ay dawladdu door weyn ku leedahay, maadaama oo aan bulshada wax wacyi-gelin ah la siinin, isla markaana boqolkiiba sagaashan aanay dadku wax fahan ah ka haysanin qaabka loo wado howsha.
Sidee diwaan-gelintu u socotaa?
Diwaan-gelinta Medeniga ah ayaa si habsami ah uga socda in ka badan 38 goobood oo looga asteeyay dagmooyinka caasimadda Hargaysa
“Haa maalin walba waxaanu diwaan-gelinaa ugu yaraan boqol qof, laakiinse waxaad dareemaysaa inaanay dadku faham badan ka haysan oo haddii wacyi-gelin la sameyn lahaa ay dadku badan lahaayeen, wayse soo kordhayaan” ayuu yidhi Axmed oo ka mid ah howl-wadeenada fulinaya diwaan-gelinta oo Wargeyska Somalilandtoday la hadlay, isagoo ku sugan mid ka mid ah Goobaha howshu ka socoto.
“Waxa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya dadka u soo dareeraya goobahan diwaan galinta madaniga ah, si ay u xaqiijiyaan inay helaan kaadhka aqoonsiga muwaadinka si ay uga duwanaadaan dadka aan waddanka u dhalan ee soo galootiga ah” ayuu yidhi Indho-indheeye u kuur galay howshan socota.
Tirada dadka is-diwaan-geliyay ayaa aad uga yar intii laga filayay inay markii hore, waxaanay howshu socotaa saddex usbuuc wakhti ka badan, hadana shaqaalaha iyo saraakiisha xogta haysaa waxay tibaaxeen in tiro gaadhaysa 10% ay ka soo xaadireen goobaha is-diwaan-gelinta.
Balse waxa muuqata inaan shaqaalaha ku sugan goobahani howli ku baaqan oo ay labada gelinba shaqeeyaan, taasoo aad dareemayso in dib u dhacu ka imanaya xagga Bulshada.
Tijaabo lagu qanci karo
Koox wariyeyaal ah oo si xaqiiqo raadin ah ugu kuur galay tayada qalabka dadka lagu diwaan-gelinayo, ayaa u muuqday inay ku qanceen natiijadii uga soo baxday tijaabo hortooda lagu sameeyay.
Mid ka mid ah Wariyeyaashan ayaa la diwaan-geliyay, waxa laga qoray magaciisa, ka hooyadii, da’diisa, meesha uu ku dhashay, halkuu degenyahay, jinsiyaddiisa lab iyo dhedig kuu yahay, Caaqilkiisa, Telefoonkiisa, xidhiidhka caaqilkiisa, inuu xaas leeyahay, tirada carruurtiisa, kaddibna waxa laga qaaday sawir kur ah, mid Indhaha ah iyo Tobanka farood. “ Qofku afar farood ayuu saarayaa, hadana afarta kale ayuu ku xigsiinayaa, waxaanu marka ugu dambeysay Mishiinka saarayaa labadiisa Suul oo wada socda”. Ayuu u sheegay Diwaan-geliyaha shaqada waday.
Suxufiga la diwaan-geliyay ayaa mar kale laysku dayay in la diwaan-geliyo, inta macluumaadkiisa la bedelo, balse markii ugu dambeysay ee Sawirka Indhaha iyo faraha la soo gaadhay, ayaa Mishiinkii ku qaliyay, taasoo waxay ahayd tijaabo ay ku qanceen Suxufiyiintani haddii ay jirtay doodda ah ku noqnoqasho ayaa dhacday.
Dhammaan qalabka goobta yaalay ee lagu diwaan-geliyay waxay ahaayeen kuwo cusub oo Shandad ku wada jiray, oo marka horeba loogu talo galay samayskooda in shaqadan lagu qabto.
Hawl-wadeenada gacanta ku haya qalabka diwaan galinta ayaa bulshada kalsooni buuxda ka siiyay muhiimadda kaadhkani u leeyahay qof kasta oo muwaadin ah “borobogaande kasta oo suuqa ku jira marka laga yimaaddo, waxaannu umadda u sheegaynaa inuu qalabkani yahay mid ammaan ah oo aanay qofka Macluumaadkiisu dhaafayn Mishiinkaa lagu diwaan-geliyay, wax saameyn ahna aanay ku yeelan doonin hadduu dalka meel kale uga baxayo ama uu dhoofayo.” ayuu yidhi Sarkaal sare oo ka tirsan Shaqaalaha Mashruucan fulinayaa. kaasoo intaas raaciyay “Qalabkan qarankaa leh, wasiirraa qaatay, Madaxweynahaa isdiwaan-geliyay, seerfarkani maaha mid ku xidhan dalal kale oo dibadda ay u baxayso macluumaadka la geliyaa” ayuu sii raaciyay Abokor.
Mulkillaha shirkadda Mashruucan fulinaysa ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inay hawshan qabtaan “Waxaa noo sharaf ah in aanu ku guulaysano hirgalinta nidaam lagu kalsoonyahay oo aanu kaga duwanaanay shirkado ajaanib ah oo nala tartamay” ayuu yidhi Eng Maamulaha Shirkadda qandaraastay keenista iyo fulinta mashruucan.
Waxa uu sii yidhi isagoo suxufiyiinta la hadlaya ” sababta keentay inaanu ka guulaysanay shirkadaha kale waxaa ka mid ah inaanu meesha ka saarno ku noqnoshadii diwaan galintii hore. qalabkan diwaangalintuna aanu ogolanayn qof kasta oo isku daya inuu ku noqnoqdo diwaan galinta, goob kasta iyo gobol kasta oo uu tago”ayuu yidhi.
Wacyi-gelinta Masuuliyiinta Dawladda
Inkasta oo aan wacyi gelin ballaadhan dawladdu aanay samaynin, isla markaana warbaahinta dawladda laga baahiyo barmaamijyo dhowr ah, hadana inta badan wasiirrrada xukuumadda ayaa fagaareyaasha ka gudbiya fariimo ay ku dhiiri gelinayaan in la isdiwaan-geliyo.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyi-gelinta Somaliland Cabdi-waaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan oo todobaadkan ka hadlayay Xaflad lagu furayay Kuliyadda saxaafadda ee Jaamacadda Golis, ayaa shacbiga ugu baaqay inay isdiwaan-geliyaan.
Waxa uu sharaxaad ka bixiyay muhiimada ay muwaadiniinta u leedahay qaadashada Kaadhka Dhalashada, si loo kala garto iyaga iyo ajaanibka.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Cali Maxamed Waran-cadde ayaa todobaadkii hore ganafka ku dhuftay dhaliilaha Mucaaridka ee Diwaan-gelinta, waxaanu caddeeyay inuu fulayo mashruucani, wax hakad ahina aanu ku iman.
Warancadde ayaa intaa ku daray in bisha October qof aan haysan Kaadhka Dhalashadu aanu Hargeysa ka heli doonin dhammaan adeegyada aasaasiga ah. “ bishan dhamaadkeeda Hargeysa ma jiri doono qof aan Teesaro lahayn oo Lacag ka qaadan kara Xawaalad, Gaadhi ku dhex kaxaysan kara, hadii lagu qabtona waxa laga qaadayaa talaabo”.ayuu yidhi ina Waran-cadde.
Marka lays barbar dhigo Hanjabaadda Wasiirka ka soo yeedhaysa, tiradda dadka isdiwaan-geliyay oo toddobaadkan la siin doono Kaadhadhkooda iyo wakhtiga kooban ee ka hadhay dhammaadka Bisha October, waxa muuqata inuu cidhiidhi wakhti jiro, dadkuna aanay aad ugu baraarugsanayn arrintan.
Qorshaha Gobollada kale
Sida uu qorshuhu yahay marka ay dhamaato Diwaan-gelinta Gobolkan Maroodi-jeex ka socotaa, ayaa loo gudbi doonaa Gobollada kale ee dalka, oo tiro ahaan ka dad yar, balse iyagana wakhti ay howshoodu qaadan doonto.
Dar-dar gelin deg deg ah
Si kastaba ha ahaatee, shacbiga Somaliland waxay wali tebayaan in wacyi-gelin ku filan la siiyo si ay isu-diwaan-geliyaan, isla markaana laga jaahil saaro waxyaabaha ay uga maagayaan inay deg deg uga xaadiraan goobaha tiro-koobka Jinsiyadaha iyo codbixiyeyaasha.
Taasi waa waxa kaliya ee Xukuumadda looga baahanyahay inay deg deg ugu dhaqaaqdo, si la mid ah sidii ay ugu dhiiratay, ugana jibbo gaadhay go’aankeedii ahaa inaanay dhaqaalaha ku baxaya Mashruucan diwaan-gelinta cid kale u daba fadhiisan ee ay Khasnaddeeda ka bixiso, arrintaasoo ah tallaabo taariikhiya, haddii ay midho dhal ku dhamaato.